‘Kuisa Pfungwa Dzako Pazvinhu Zvomudzimu Kunoreva Upenyu Norugare’ | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kamba Kannada Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Vaya vanoita maererano nomudzimu, [vanoisa pfungwa dzavo] pazvinhu zvomudzimu.”​—VAR. 8:5.
NZIYO: 57, 52
Pasinei netariro yatiinayo, nei tichigona kubatsirwa nekukurukura chitsauko 8 chaVaRoma?
MuKristu angatanga sei ‘kuisa pfungwa dzake pazvinhu zvenyama’?
Kuisa pfungwa dzedu pazvinhu zvomudzimu kunosanganisira kuitei?
1, 2. Nei vaKristu vakazodzwa vachinyanya kuda kuziva zviri muchitsauko 8 chaVaRoma?
WAKAMBOVERENGA VaRoma 8:15-17 panguva yekuyeuka rufu rwaJesu here? Mavhesi iwayo anotsanangura kuti vaKristu vanoziva sei kuti vakazodzwa. Mudzimu mutsvene unopupurirana nemudzimu wavo. Uye vhesi yekutanga muchitsauko ichocho inotaura ‘nezvevaya vari pamwe naKristu Jesu.’ Asi chitsauko 8 chaVaRoma chinongoshanda kune vakazodzwa chete here, kana kuti chinoshandawo kuvaKristu vane tariro yekurarama panyika?
2 Chitsauko ichocho chinonyanya kutaura nezvevaKristu vakazodzwa. Vanowana “mudzimu” sevaya vari ‘kumirira nomwoyo wose kugamuchirwa sevanakomana, iko kusunungurwa mumiviri yavo yenyama.’ (VaR. 8:23) Vane tariro yekuzova vanakomana vaMwari kudenga. Izvi zvinokwanisika nekuti vakava vaKristu vakabhabhatidzwa uye Mwari akaita kuti vabatsirwe nerudzikinuro, akavaregerera zvivi zvavo uye akavati vakarurama sevanakomana vake.​—VaR. 3:23-26; 4:25; 8:30.
3. Nei vaya vane tariro yekurarama panyika vachifanira kudzidzawo zviri muchitsauko 8 chaVaRoma?
3 Zvisinei, vaya vane tariro yekurarama panyika vanofarirawo chitsauko 8 chaVaRoma nekuti Mwari anovaonawo sevakarurama. Izvozvo zvinoratidzwa nemamwe mashoko akatanga kunyorwa naPauro mutsamba yacho. Muchitsauko 4 akataura nezvaAbrahamu. Murume iyeye akararama Mwari asati apa vaIsraeri Mutemo uye painge pachine nguva yakareba zvikuru kuti Jesu afire zvivi zvedu. Kunyange zvakadaro, Jehovha akaona kuti Abrahamu aiva nekutenda kwakakura uye akamuti akarurama. (Verenga VaRoma 4:20-22.) Saizvozvowo, Jehovha anogona kuona vaKristu vakatendeka uye vane tariro yekurarama nekusingaperi panyika sevakarurama. Saka vanogona kubatsirwa nemazano akanyorerwa vakarurama ari muchitsauko 8 chaVaRoma.
4. VaRoma 8:21 inofanira kuita kuti tifunge nezvemubvunzo upi?
4 Mashoko ari pana VaRoma 8:21 anoita kuti tive nechivimbo chekuti nyika itsva ichauya chete. Vhesi iyoyo inovimbisa kuti “zvisikwa zvichasunungurwawo muuranda hwokuora zvova norusununguko runobwinya rwevana vaMwari.” Mubvunzo ndewekuti, tichange tiri munyika yacho here? Une chivimbo chekuti uchange urimo here? Chitsauko 8 chaVaRoma chine mazano achakubatsira kuti ukwanise kupinda munyika yacho.
5. Pana VaRoma 8:4-13, Pauro aitaura nezvenyaya ipi yakakura?
5 Verenga VaRoma 8:4-13. Chitsauko 8 chaVaRoma chinotaura nezvevaya vanofamba “maererano nenyama” vachisiyaniswa nevaya vanofamba “maererano nomudzimu.” Vamwe vangafunga kuti chitsauko chacho chinosiyanisa vanhu vasiri muchokwadi nevari muchokwadi. Asi Pauro ainyorera vaya vaiva “muRoma sevanodiwa vaMwari, vakadanwa kuti vave vatsvene.” (VaR. 1:7) Saka Pauro aisiyanisa vaKristu vaifamba maererano nenyama nevaKristu vaifamba maererano nemudzimu. Musiyano wacho waiva papi?
6, 7. (a) Bhaibheri rinoshandisa sei shoko rekuti “nyama”? (b) Pana VaRoma 8:4-13, Pauro akashandisa shoko rekuti “nyama” mupfungwa ipi?
6 Ngatitangei nekuongorora shoko rekuti “nyama.” Pauro aitaura nezvei? Bhaibheri rinoshandisa shoko rekuti “nyama” munzira dzakasiyana-siyana. Dzimwe nguva rinoreva nyama chaiyo yemuviri wedu. (VaR. 2:28; 1 VaK. 15:39, 50) Rinogonawo kureva ukama. Jesu “akabva kuvana vaDhavhidhi panyama” uye Pauro aiona vaJudha ‘sehama dzake panyama.’​—VaR. 1:3; 9:3.
7 Asi zvakanyorwa naPauro muchitsauko 7 zvinotibatsira kuziva “nyama” inotaurwa pana VaRoma 8:4-13. Akataura ‘nezvekuita zvinoenderana nenyama’ achizvibatanidza ‘nezvido zvokutadza’ izvo ‘zvakanga zvichishanda mumiviri yavo.’ (VaR. 7:5) Izvi zvinotibatsira kuziva zvinorehwa nemashoko ekuti “vaya vanoita maererano nenyama,” avo vakanzi naPauro, “vanoisa pfungwa dzavo pazvinhu zvenyama.” Aitaura nezvevaya vanotongwa nezvido zvavo kana kuti vanonyanya kuisa pfungwa dzavo pazviri. Ava ndevaya vanoita maererano nezvishuvo kana kuti zvido zvavo, zvingava zvebonde kana kuti zvimwewo.
8. Nei zvainge zvakakodzera kuti kunyange vaKristu vakazodzwa vanyeverwe nezvekufamba “maererano nenyama”?
8 Asi unganetseka kuti nei Pauro akanyevera vaKristu vakazodzwa nezvengozi yekurarama “maererano nenyama.” Mazuva ano vaKristu vanogonawo kuva pangozi yakadaro here? Zvinosuwisa kuti chero muKristu upi zvake anogona kutanga kufamba maererano nenyama ine chivi. Semuenzaniso, Pauro akanyora kuti vamwe vaKristu muRoma vaiva varanda “vematumbu avo [kana kuti zvido zvavo].” Anogona kunge aireva kuti vainyanya kukoshesa bonde, zvekudya, kana kuti zvimwe zvinhu zvinofadza. Vamwe vavo ‘vainyengedza mwoyo yevasina mhosva.’ (VaR. 16:17, 18; VaF. 3:18, 19; Jud. 4, 8, 12) Yeukawo kuti imwe hama yaiva muKorinde yakambogara ‘nemudzimai wababa.’ (1 VaK. 5:1) Saka zvinonzwisisika kuti nei Mwari akashandisa Pauro kuti anyevere vaKristu ‘nezvekufunga kwenyama.’​—VaR. 8:5, 6.
9. Ndepapi pasingashandi nyevero yaPauro iri pana VaRoma 8:6?
9 Nyevero iyoyo inokoshawo mazuva ano. MuKristu ava nemakore achishumira Mwari anogona kutanga kuisa pfungwa dzake pazvinhu zvenyama. MuKristu ari kutaurwa pano haasi uya anombofunga nezvechikafu, basa, kutandara, kuratidza rudo kune mumwe wake. Zvinhu izvozvo zvinodiwa muupenyu. Jesu ainakirwawo nezvekudya uye akapawo vamwe zvekudya. Aiziva kuti munhu anodawo nguva yekumbofurwa nemhepo. Uye Pauro akanyora nezvekukosha kwebonde muwanano.
Zvaunotaura zvinoratidza kuti pfungwa dzako dziri pazvinhu zvomudzimu here kana kuti zvenyama? (Ona ndima 10, 11)
10. Mashoko ekuti “vanoisa pfungwa dzavo” ari pana VaRoma 8:5, 6, anorevei?
10 Saka Pauro airevei paakataura ‘nezvekufunga kwenyama’? Shoko rechiGiriki rakashandiswa naPauro rinoreva kuisa pfungwa dzose pane chimwe chinhu. Vaya vanorarama maererano nenyama vanobvumira kuti upenyu hwavo hudzorwe nenyama yavo ine chivi. Mumwe muongorori weBhaibheri akataura nezvevanhu ivavo achiti: “Vanoisa pfungwa dzavo pazvinhu zvenyama, kureva kuti vanoda zvinhu izvozvo zvakanyanya, vanogara vachitaura nezvazvo, vachizviita uye vachizvirumbidza.”
11. Zvinhu zvipi zvatingafunga nezvazvo patinenge tichizvibvunza kuti, ‘Chii chandinonyanya kufarira muupenyu?’
11 Zvainge zvakakodzera kuti vaKristu vaiva muRoma vaongorore zvavainyanya kukoshesa muupenyu. Kungava here kuti upenyu hwavo hwaingova hwekutsvaga “zvinhu zvenyama”? Uye zvakakodzera kuti tizviongororewo isu pachedu. Chii chatinonyanya kufarira, uye zvatinotaura zvinoratidzei? Zvii zvatinogara tichimhanyisana nazvo zuva nezuva? Vamwe vangaona kuti vanonyanya kufunga nezvekuravidza mhando dzakasiyana-siyana dzewaini, kushongedza misha yavo, kuwana mbatya dziri mufashoni, kuita kuti mari ibereke, kuronga nzendo dzekushanyira dzimwe nzvimbo, nezvimwewo. Zvinhu zvakadaro hazvina kumboshata, zvinhu zvinogona kuitwa nevanhu muupenyu. Semuenzaniso, Jesu akamboita kuti pave newaini, uye Pauro akaudza Timoti kuti anwe “waini shomanana.” (1 Tim. 5:23; Joh. 2:3-11) Asi Jesu naPauro vaigara vachitaura nezvewaini kana kugara vachiirumbidza here? Vainyanya kuida here zvekuti vaigara vachitaura nezvayo? Aiwa. Ko isu? Chii chatinonyanya kufarira muupenyu?
12, 13. Nei tichifanira kungwarira patinoisa pfungwa dzedu?
12 Kuzviongorora kunokosha. Nei kuchikosha? Pauro akanyora kuti: “Kufunga kwenyama kunoreva rufu.” (VaR. 8:6) Iyoyo haisi nyaya yekutamba nayo, nekuti kunoreva kufa pakunamata iye zvino, uye kufa chaiko munguva yemberi. Kunyange zvakadaro, Pauro aisareva kuti kana munhu akatanga kuisa pfungwa dzake ‘pazvinhu zvenyama’ anenge atonanga kurufu zvekuti haachakwanisi kuchinja. Munhu akadaro anogona kuchinja. Funga nezvemurume wemuKorinde akatora mudzimai wababa vake ndokuzodzingwa. Kunyange zvakadaro, aikwanisa kuchinja uye ndizvo zvaakazoita. Akarega kufamba maererano nenyama ndokudzoka panzira yakarurama.​—2 VaK. 2:6-8.
13 Kana murume iyeye aikwanisa kuchinja, mazuva ano muKristu anokwanisawo kuchinja, kunyanya uya anenge asina kuita zvinodiwa nenyama kusvika pane zvakaitwa nemurume wemuKorinde. Nyevero yakapiwa naPauro pamusoro pezvinogona kuzoitika kumunhu “anoisa pfungwa dzake pazvinhu zvenyama” inofanira kuita kuti vaKristu vachinje mararamiro avo.
14, 15. (a) Pauro akatikurudzira kuisa pfungwa dzedu pachii? (b) “Kufunga kwomudzimu” hakurevi chii?
14 Pashure pekunge muapostora Pauro anyevera ‘nezvekufunga kwenyama,’ akataura mashoko anopa tariro ekuti: “Kufunga kwomudzimu kunoreva upenyu norugare.” Mubayiro iwoyo wakazonaka zvikuru! Tingauwana sei?
15 “Kufunga kwomudzimu” hakurevi kuti munhu anenge asingazivi kuti zvinhu zvakamira sei muupenyu. Hazvirevi kuti munhu wacho anongofunga uye kugara achitaura nezvaJehovha kana kuti nezveBhaibheri chete. Ngatiyeukei kuti Pauro nevamwe vaKristu vepanguva yake vairarama sezvaiitawo vamwe vanhu. Vaidya uye vainwa. Vakawanda vairoora nekuroorwa uye kuitawo mhuri dzavo, vachishanda kuti vazviriritire.​—Mako 6:3; 1 VaT. 2:9.
16. Kunyange zvazvo Pauro aiitawo zvaiitwa nevamwe pakurarama, chii chaainyanya kukoshesa muupenyu?
16 Zvisinei, vashumiri vaMwari ivavo havana kunyanya kukoshesa zvinhu zvezuva nezuva zvinoitwa pakurarama. Pashure pekutaura kuti Pauro aiita basa rekugadzira matende, Bhaibheri rinoratidza zvaainyanya kukoshesa muupenyu hwake. Nguva yake yakawanda aiishandisa pabasa rechiKristu rekuparidza nekudzidzisa. (Verenga Mabasa 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Izvi ndizvo zvaakakurudzira hama nehanzvadzi dzemuRoma kuti dziite. Pauro ainyanya kukoshesa zvinhu zvekunamata. VaRoma vaifanira kumutevedzera, uye ndizvo zvatinofanira kuitawo.​—VaR. 15:15, 16.
17. Kana tikava ‘nekufunga kwomudzimu’ tinogona kuva neupenyu hwakaita sei?
17 Kana tikaramba tichifunga nezvekushumira Jehovha, tichava neupenyu hwakaita sei? VaRoma 8:6 inopindura zvakajeka kuti: “Kufunga kwomudzimu kunoreva upenyu norugare.” Izvozvo zvinoreva kubvumira pfungwa dzedu kuti dzitungamirirwe nemudzimu mutsvene uye kudzidza kufunga semafungiro anoita Mwari. Tinogona kuva nechokwadi chekuti kana tikanyanya kukoshesa zvinhu zvekunamata muupenyu hwedu, tichava neupenyu hunogutsa iye zvino. Pakupedzisira tichawana upenyu husingaperi, kungava kudenga kana kuti panyika.
18. “Kufunga kwomudzimu” kunounza sei rugare?
18 Ngatifungisisei nezvevimbiso yekuti “kufunga kwomudzimu kunoreva . . . rugare.” Zvinoomera vakawanda kuti vawane rugare rwemupfungwa. Vari kuparapatika vachitsvaga rugare asi isu titori narwo. Chimwe chezvinhu zvinoita kuti tive nerugare rwakadaro ndechekuti tinoedza kwazvo kuva nerugare nevemumhuri medu uye vemuungano. Tinoziva kuti isu pamwe chete nevatinonamata navo tine chivi. Nemhaka yechivi, matambudziko anomuka pano neapo, uye kana izvi zvikaitika, takadzidziswa kuteerera zano raJesu rekuti: “Ita kuti uve norugare nehama yako.” (Mat. 5:24) Izvi zvinova nyore kuti tidaro patinoyeuka kuti hama kana hanzvadzi yedu iri kushumirawo “Mwari anopa rugare.”​—VaR. 15:33; 16:20.
19. Kana tikava ‘nekufunga kwomudzimu,’ tichava nerugare rwakaita sei?
19 Pane rumwe rugare runokosha zvikuru. Patinova ‘nekufunga kwomudzimu,’ tinova nerugare neMusiki wedu. Isaya akanyora mashoko aishanda panguva yaakararama uye ari kuzadzika zvakatonyanya mazuva ano. Akati kuna Jehovha: “Muchachengetedza zvinodiwa zvinonyatsotsigirwa murugare runoramba ruripo, nokuti munhu anoitwa kuti avimbe nemi.”​—Isa. 26:3; verenga VaRoma 5:1.
20. Nei uchionga zano riri muchitsauko 8 chaVaRoma?
20 Tingava tiri vakazodzwa kana kuti vaya vane tariro yekurarama nekusingaperi muparadhiso panyika, tose tinogona kubatsirwa nemazano akafemerwa ari muchitsauko 8 chaVaRoma. Tinoonga kukurudzirwa kwatinoitwa neBhaibheri kuti tinyanye kufunga nezvekushumira Jehovha pane kufunga zvinodiwa ‘nenyama’ yedu. Tinoziva kuti kunenge kuri kuchenjera kurarama zvinoenderana nevimbiso yakafemerwa yekuti: “Kufunga kwomudzimu kunoreva upenyu norugare.” Tikaita izvi tichawana mubayiro unogara nekusingaperi, nekuti Pauro akanyora kuti: “Mubayiro wechivi ndirwo rufu, asi chipo chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe wedu ndihwo upenyu husingaperi.”​—VaR. 6:23.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe ‘Kuisa Pfungwa Pazvinhu Zvomudzimu Kunoreva Upenyu Norugare’
‘Kuisa Pfungwa Dzako Pazvinhu Zvomudzimu Kunoreva Upenyu Norugare’